CNTMAD: Hanomboka ny Alatsinainy faha-3 ka hatramin’ny faha-7 Novambra izao ny fanadinana. | Canalnews Madagascar
Home EDUCATION CNTMAD: Hanomboka ny Alatsinainy faha-3 ka hatramin’ny faha-7 Novambra izao ny fanadinana.
CNTMAD: Hanomboka ny Alatsinainy faha-3 ka hatramin’ny faha-7 Novambra izao ny fanadinana.
By Nirinaoct 30, 2014, 07:18 0
Hiatrika ny fanadianana famaranana ny taona 2013-2014 ireo mpianatra eo anivon’ny CNTMAD na ny sekoly ampitain-davitra. Efa vonona avokoa ny ho entina manatanteraka izany na ny laza adina na ireo foibem-pampianarana miisa 31 manerana ny nosy raha ny fanazavan’ny tale jeneralin’ny sekoly Andriamatoa RAKOTONDRAMPARANY Sylvain. Mpianatra manodidina ny 16000 no nandranto fahalalana tao ary ampahany amin’izany no handray anjara amin’io, ahitana lalam-piofanana isaky ny sokajiny avy. Manentana ny rehetra indrindra fa ireo mbola tsy naharay ny taratasy fiantsoana ahafahana miatrika izany mba hanatona ireo foibe akaiky azy. Aorian’io dia efa hisy sahady ny fandraisana ireo mpianatra hanovo fahalalana amin’ity taom-pampianarana ity ka hisy ny zava-baovao ho entina hanatsarana ny lafiny fampianarana amin’ny alalan’ny teknolojia vaovao izay tsy azo ihodivirana intsony dia ny fampiasana solosaina ka hanatevenana ireo traikefa sy fahaiza-manao efa nisy teo aloha.
INTERVIEW : RAKOTONDRAMPARANY Sylvain
TAGCNTMAD RAKOTONDRAMPARANY Sylvain
Previous PostFOARAN’NY SAKAFO SY LAKOZIA: Hampifandraisana ny vokatra vita eto an-toerana sy any ivelany. Next PostEMISSION : DEPUTE MAHAZOASY Freddie, vonona hitondra fampandrosoana any amin’ny faritra nahalany azy any Antsiranana.
Hampidirina ao anatin’ny fandaharam-pianaran’ny CNTMAD ny fampiasana ny logiciel libre. Nisy ny andro natokana ho an’izany ny zoma teo niarahana tamin’ny AUF